Orinasa mpamokatra Ice Ice Pack sy mpamatsy | Huizhou
Kitapo ranomandry maina hydrate
Vata mangatsiaka plastika
Vata mangatsiaka VIP
Ny fonosana ranomandry Huizhou dia natao manokana ho an'ny fivarotam-panafody sy bio ary koa ireo entana mora tohina amin'ny hafanana mandritra ny fandefasana rojony mangatsiaka. Izy ireo dia tokony hitondra ny maripana manodidina amin'ny fonosana iray amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana mangatsiaka.
Ny fonosana gilasy 1.Huizhou dia natao manokana ho an'ny fivarotam-panafody sy sakafo vaovao ary koa ny hafa entana mora tohina nandritra ny fandefasana rojo mangatsiaka. Izy ireo dia tokony hitondra ny maripana manodidina amin'ny fonosana iray amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana mangatsiaka.
2.The Gel Ice Pack dia vita avy amin'ny fitaovana fanovana dingana (PCM) ho toy ny vata fampangatsiahana anaty sy ny fonosana ivelany voaisy tombo-kase amin'ny lafiny aoriana.Nandritra ny traikefa an-taonany maro tao anaty fonosana fanaraha-maso ny mari-pana mangatsiaka, ny fonosana gilasy ataontsika dia mivoatra tsara ho an'ny fifehezana ny mari-pana tsara kokoa, ny kalitao avo kokoa ary ny fonosana matevina amin'ny fepetra takiana.
3. Afaka manome tolotra ranomandry mangatsiaka miendrika endrika ihany koa isika fa boribory ny zoro efatra anatiny, fa tsy ny kianja izay mety maranitra kokoa rehefa avy nangatsiaka. ny fonosana ranomandry zoro boribory mety kokoa raha sendra ao anaty boaty EPS ilay fonosana izay mora voakiky.
1.Gel Ice Pack dia natao hitondra fitoniana amin'ny manodidina azy, amin'ny alàlan'ny fifanakalozana rivotra mangatsiaka sy mafana na conduction.
2. Ho an'ny sehatry ny sakafo vaovao dia ampiasaina amin'ny fitaterana vokatra vaovao, mora simba ary mahamay, toy ny: hena, hazan-dranomasina, voankazo sy legioma, sakafo voaomana, sakafo mangatsiaka, gilasy, sôkôla, vatomamy, mofomamy, mofomamy, fromazy, voninkazo, kosmetika, ronono, sns.
3. Ho an'ny tsipika fivarotam-panafody, Gel Ice Pack dia matetika ampiasaina amin'ny fandefasana fanafody biokimika, santionany ara-pitsaboana, zava-mahadomelina, plasma, vaksinina, sns.
4.Ary ho an'ny fampiasan'izy ireo manokana, dia azo ampiasaina amin'ny vonjy taitra, fanaintainana na fanasitranana amin'ny ratra izy ireo, mitondra tazo.
Mandritra izany fotoana izany dia tsara ihany koa izy ireo raha hampiasaina any ivelany raha toa ka ataovy ao anaty kitapo fisakafoanana ilay fonosana gilasy, kitapo mangatsiaka kokoa mba hitazomana ny sakafo na zava-pisotro mangatsiaka rehefa mitsangatsangana, mitoby, piknikika, mandeha sambo ary manjono.
5. Ho fanampin'izay, raha apetraka ao anaty vata fampangatsiahana ny fonosana gilasy mangatsiaka, afaka mamonjy herinaratra na mamoaka hatsiaka ihany koa izy ary mitazona ny vata fampangatsiahana amin'ny hafanana mangatsiaka rehefa maty.
Lamba vita vita amin'ny lamba tsy misy tenona -10 ℃ ， -15 ℃ ， -18 ℃ ， -25 ℃ ，
5 18 ， 18 ℃ ， 22 ℃
Fanamarihana: Misy endrika manokana.
1.Non-poizina (Ny akora anatiny indrindra dia rano, polymer avo.) Ary izy ireo dia sedraina Tatitra fanapoizinana am-bava mahery vaika.
2.Mora ny mitondra, ary ny fampiharana isan-karazany raha ilaina ny coolness.
Fampiasana miverimberina alohan'ny daty famaranana azy.
4. Safidy namboarina azo alaina avy amin'ny fitaovana anatiny mankany amin'ny endrika endrika
5.Ny fonosana ranomandry boribory dia azo alaina mba hisorohana ny fahasimbana mety hitranga amin'ny gel
Joro maranitra maranitra kokoa.
1.Mba hiantohana ny fampisehoana tsara indrindra, azafady mba alao antoka fa voafafa tanteraka izy ireo ao a
vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana na trano fanaovana vata fampangatsiahana alohan'ny hampiasana azy.
2.Raha misy fivoahana na fahasimbana, alao rano izy ireo ary ario ny fonosana.
3.Ny Ice Ice Pack dia azo ampiasaina miverimberina alohan'ny datin'ny fahataperany.
Teo aloha: Kitapo misy ranomandry tsindrona rano